Iimvavanyo zeSifundo sokuFunda nokuVavanya ngePSs
Ootitshala banomsebenzi onzima. Akudingeki nje ukuba bafundise imimandla yabo yenkalo yomxholo, kodwa kufuneka bancede abafundi babo bafunde ukuqonda ukuqonda, nabo! Ngamanye amaxesha, kunzima ukwenza konke kumxholo xa ufuna ukugxila kwizakhono. Ngezantsi, nceda fumana iphepha lokufunda lokufunda ngokukhululekileyo elipheleleyo elipheleleyo ngemibuzo ekhethiweyo yokukhetha kunye neminye imibuzo ye-essay, nayo. Iphepha lokusebenzela ngalinye lingagqitywa kwi-intanethi, okanye unokushicilela ifayile ye-pdf eneenkcukacha ngokukhululeka kokusetyenziswa kwamagumbi okufundela.
Amaphepha okusebenzela aya kunceda abafundi bakho balungiselele ukuvavanya ukuvavanya ukufunda, okanye kwinqanaba lokufunda elibucayi naziphi na iimvavanyo ezifanayo njengeSAT , PSAT , GRE kunye nokunye! Ibhonasi? Unako ukubenza nabo ukuze kube nezicwangciso ezilula zokufunda ezifanelekileyo ukuba kufuneka uphume. Yiyo nje yokuphumelela!
Imibuzo yokuHlola engaHlakaliyo
Lekhonkco iya kukuthabathela ekubulaweni kokufunda izifundo ezisekelwe kwiivesi ezingenanto. Leli gama libala inani ukusuka kwi-500+ ukuya kwi-2,000, kwaye umxholo uhluka kwiintetho ezidumileyo kwizinto eziphilayo. Sebenzisa iphepha lokusebenzela kunye nokuhamba nemibuzo ekhethiweyo yokuvavanya abafundi bakho ukuba bafumane ingcamango ephambili, ukuvavanya injongo yombhali, ukwenza iingqinisiso, ukuqonda isigama kwiimeko kunye nokunye!
Imibuzo yokuFundisisa UkuFunda
Apha, funda uluhlu lwee-worksheet zokufunda ngokusekelwe kwiindinyana eziqingqiweyo. Leli gama libala inani ukusuka kuma-800 ukuya ku-3,000+.
Izicwangciso zoluhlu luvela kwikhiyi yamhla yangoku ukuya kwi-19 yekhulu le-19 leminyaka. Kwaye njengemibuzo yokuqonda yokungaqondanga ukufundwa apha ngasentla, oku kugxininisa kwizakhono ezinjengeengcamango eziphambili, ukuchithwa kwemali , i- vocab kumxholo kunye nokunye, kwakhona.
Iingcamango eziphambili zeePhepha
Ngelixa i-nonfiction kunye ne-fiction worksheets apha ngentla inikeza imibuzo ehlukeneyo, ezi phesheya zijolise kuphela ekufumaneni ingcamango ephambili.
Nantsi, uzakufumana ishidi lomsebenzi wemihlathi eyahlukileyo elandelwa yimibandela ekhethiweyo apho abafundi baya kufuneka banqande abaphazamisi ukuba bafumane ingcamango echanekileyo (ukuchithwa kwezinto ezincinci, ezibanzi, ezichanekileyo, njl.), okanye imibuzo evulekileyo apho abafundi baya kudingeka ukuba babhale ingcamango ephambili ingaba ithetha okanye ichazwe.
Isigama kwiMathematika yoLwazi
Ngamanye ama-worksheets kule nxu lujolise kwi-snippet evela kwibali okanye kwinqaku elingabonakaliyo kwaye lilandelwa imibuzo ekhethiweyo yokucela abafundi ukuba baqonde intsingiselo yesigama esisigxina kumxholo. Amagama ahlukeneyo kunzima, nangona umxholo ubaluleke kakhulu ekukhethiweyo ngalunye ekuqaliseni intsingiselo.
Amaphepha amathathu okuqala asebenzayo afika neepdfs zokushicilela kwaye afaka zombini imibuzo ekhethiweyo evulekile kwaye ekhethiweyo. Ezi zintathu zokugqibela zenzelwe ukugqitywa kwi-intanethi. Abafundi baya kujonga imifanekiso, kwaye ngokusekelwe kwiifoto okanye kwiimifanekiso, yenza inkcazo exhaswa ngububungqina obuboniswe kwisikrini.
Umbhalo weNjongo yoMlobi
Ezi phesheya zinikeza iindidi zeziqendu, zilandelwa ngumbuzo wenjongo yombhali ofanayo naleyo kwiimvavanyo eziqhelekileyo.
Kwimihlathi nganye, abafundi baya kufuna ukukhetha ukhetho olulungileyo olumele umlobi wenjongo yokubhala le ndinyana. Le ngcamango ehlukileyo kakhulu ekufumaneni ingcamango ephambili okanye ekuqaliseni ithoni yomlobi.
Injongo yoMlobi Inqaku lokusebenzela 1
Injongo yoMbhali Incwadana yesiSeko 2
Iifom zemiSebenzi yeTone yoMxholo
Olu khetho lwakhiwo lwakhiwa ngoku! Kodwa okwangoku, unokufumana ifayile yomsebenzi wombhali omnye kunye nokuza kutshanje.
IsiFulentshi IsiHlomelo sokuThetha isiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiFulentshi
Isisombululo se-High-Tech soLawulo lweMkhukula
Ziziphi iiMerika ezinokuSholarships Lottery?
Yintoni 'i-Duffer' eGoli?
Imbali yeSixeko sase-Antigua, eGuatemala
Ufuna Ukufunda Indlela Yokudweba?
Imifanekiso yesiFrentshi ngeVivre
Ukubambisana kwetenzi lwesiTaliyane: I-Spiegare
Ukusetyenziswa okongeziweyo kweelwimi elithi "Suru"
Umthetho ochanekileyo weGesi Inkcazo kunye nokulingana